Obodo Spain - Akụkọ Njem | Akụkọ Njem (Peeji nke 2)
Vejer de la Frontera bụ obodo mara mma nke nwere ụlọ ọcha na okporo ụzọ ndị dị warara. Ma o nwekwara ebe obibi mara mma.
Ejikọtara ịma mma na ịhụnanya nke Cádiz n'otu ebe: Medina Sidonia, ebe dị n'etiti ...
Potes (Cantabria) bụ obodo mara mma na mpaghara Liébana nke nwere ọtụtụ ihe ncheta na gburugburu ebe obibi mara mma.
Osimiri kacha mma na Chiclana: La Barrosa, Playa del Puerco na Sancti Petri
Chiclana bụ otu obodo mara mma dị na Cádiz, m ga-agwa gị na post a bụ oke osimiri ya kacha mma.
Toledo bụ otu n'ime obodo ndị kachasị mma na nke kacha mma echekwara na Europe. A na-akpọ ya 'obodo nke ...
Kedu ihe ị ga-ahụ na Ourense
Anyị na-agwa gị nke bụ isi ihe nwere mmasị na obodo Galician Ourense.
Dabere na mpaghara zoro ezo na obodo Campillo de Dueñas, nke dị na Guadalajara, na nnukwu okwute ...
Ọ bụghị nanị na Barcelona na-ewu ewu maka ụlọ ndị mara mma nke oge a, osimiri mara mma ya na nnukwu onyinye ọdịnala ya ...
Ebee iri nri na Madrid? 9 akwadoro ụlọ nri na obodo
Madrid nwere onyinye gastronomic sara mbara: Ebee ka iri nri na Madrid? Na nke a, m na-akọrọ gị ụlọ nri 9 akwadoro n'obodo.
Cozy na chiri anya ụlọ oriri na ọ restaurantsụ inụ na Barcelona
Barcelona, ​​ebe amụrụ ezigbo ndị siri nri, bụ obodo kachasị mma iji nwee ọ gastụ gastronomy kachasị mma na ụlọ ọrụ kachasị mma. Ugbua…
Mugardos dị n’ikpere mmiri nke Ferrol. Ya mere, o nwere ọmarịcha ọdịdị mara mma na ikuku ikuku dị mma.
Cozy na ezigbo ụlọ oriri na ọ restaurantsụ inụ na Madrid
Na Madrid enwere ụlọ nri dịgasị iche iche ebe ị nwere ike iri nri nke ọma mana họrọ naanị otu n'ime ha ...
Ribadavia, nke dị na Orense, bụ Complex Historic-Artistic Complex na isi obodo nke mpaghara Ribeiro mara mma.
Anyị na-agwa gị nkọwa zuru oke nke ị kwesịrị ịma gbasara Katidral nke Girona, ọrụ na-agwakọta ụdị ma na-akọ oke akụkọ.
Ihe ị ga-ahụ na Logroño
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma ihe ị ga-ahụ na Logroño, anyị ga-agwa gị na ihe ncheta ya na ebe ndụ akwụkwọ ndụ na-agbakwunye ndụ mmekọrịta na-atọ ụtọ na nri dị ụtọ.
Ihe ị ga-ahụ na Huelva
Mpaghara Huelva bụ ebe anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọtụtụ ntụrụndụ na ebe anyị ga-ahụ. Mara maka ya ...
Ihe ị ga-ahụ na Ibiza
Ibiza bụ agwaetiti nke ndị Balearic Islands na doro anya bụ otu n'ime ndị kasị ama. Isi ihe ...
Ihe ị ga-ahụ na Pamplona
Isi obodo nke alaeze oge ochie nke Navarre, mmalite nke Pamplona laghachi na narị afọ nke XNUMX BC mgbe ndị Rom hiwere ...
Salobreña bụ otu n’ime obodo mara mma na Costa Tropical de Granada ma maka ebe ncheta ya na oke osimiri mara mma.
Manresa na-egosi gị ihe pụrụ iche Gothic, Baroque na Modernist nnukwu ihe nketa, kamakwa ihe ùgwù eke gburugburu ebe obibi.
Ebee ka ụra na Madrid
Dị ka isi obodo Spain, Madrid bụ njem nleta na ebe azụmahịa dị mkpa nke na-anabata ọtụtụ nde mmadụ n'oge ...
Bocairent na-enye gị obodo ochie ochie magburu onwe ya, ọtụtụ ihe ncheta na iche iche na ọdịdị dị egwu.
A maara Lucena dị ka Pearl nke Sepharad n'ihi oge ochie ya n'asụsụ Hibru, mana ọ na-enyekwa gị ihe ncheta magburu onwe ya site n'oge ndị ọzọ.
Osimiri Poo, na Asturias, dị n'ime ala echedoro nke Ọwụwa Anyanwụ Coastwa, nke dị obere kilomita ...
Roda de Isábena bụ obodo ebe ị ga-ekwere na ị laghachitala oge oge mgbe ị na-aga n'okporo ámá ya dị warara ma gbaa agba.
Ọ bụ Costa de la Luz
Spanishsọ oké osimiri Spen dị oke ukwuu, kilomita 8.000 nke nnukwu ụdị akwụkwọ akụkọ dị iche iche nke meworo ka otu n'ime ...
Ihe ịhụ na Navarra
Dabere na mgbago ugwu Spain, Navarra bu obodo juputara na obodo ndi mara nma na oke aku na uba nke ...
Montgat, n'ụsọ oké osimiri Barcelona nke El Maresme, bụ obodo nwere osimiri mara mma, ihe ncheta na ọmarịcha gastronomy.
Mijas bụ otu n’ime obodo kachasị mma na Malaga Costa del Sol. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ma osimiri ma ụzọ ụkwụ njem.
Ihe ị ga-ahụ na Bilbao
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ ma mee n’obodo Bilbao, n’ebe ugwu Spain.
Cudillero na Asturias
Ihe pụrụ iche nke ọdịdị ala ya, ịdị nso nke ndị ya na ọdịnala ọdịnala ya na-atọ ụtọ mere ka kansụl nke Cudillero ...
Calatañazor, nke dị na Soria, na-enye gị ohere ịlaghachi na Middle Ages ma nwee ọmarịcha oghere nke okike dịka Sabinares.
Ihe ị ga-ahụ na León
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ na obodo akụkọ ihe mere eme nke León na obodo Castilla y León.
N'oge okpomọkụ a, ọtụtụ ndị ahọrọla ebe Spain iji nwee ezumike kwesịrị ekwesị. Ọtụtụ ndị ...
Mota del Cuervo, na La Mancha Cuenca, na-enye gị ebe dị ka nrọ na ọmarịcha ihe nketa.
Ihe ịhụ na Gran Canaria
Gran Canaria bụ agwaetiti nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke Canary Islands, na-anata ọtụtụ nde ...
Torrijos bụ obere obodo dị na mpaghara Toledo nke na-enye gị nnukwu ihe nketa na nri dị ụtọ.
Arenas de San Pedro na-enye gị ohere dị mma gburugburu ebe obibi, nnukwu ihe nketa na oke gastronomy.
A kilomita ole na ole site na Oké Osimiri Mediterenian na na ụkwụ nke a Park Park, Frigiliana na-ebili, nanị obodo ...
Castro Urdiales bụ obodo mara mma mara mma nke na-enyekwa gị oke osimiri na ọdịdị ala yana oke nri gastronomy.
Santo Domingo de la Calzada bụ obodo dị jụụ na La Rioja (Spain) nke dị n'akụkụ osimiri Oja na ...
Burgo de Osma bụ obodo mara mma na mpaghara Soria nke nwere ọmarịcha ihe nketa na nri dị ụtọ.
Barbastro bụ obere obodo juputara n’akụkọ ihe mere eme na ihe ncheta na-enyekwa mbara ala na nri dị ụtọ.
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ na obodo Asturian nke Avilés, obodo nwere obodo ochie mara mma na nnukwu gastronomy.
Aranda de Duero bụ ala nke mmanya, kamakwa akụkọ ihe mere eme. Nke a sụgharịrị ịbụ nnukwu ihe nketa na oke gastronomy.
Ememme nke mmasị ndị njem mba
Ememme ndị a ma ama bụ akụkụ nke ọdịbendị na akụkọ ọdịnala nke ndị dị iche iche nke mejupụtara mpaghara ma ọ bụ ...
Oge gara aga nke obodo a na Costa del Azahar na-agwa anyị gbasara ndị Iberia, ndị Carthaginians, ndị Rome, Templars na ndị popu na-eche onwe ha ihu ...
Ihe ị ga-eme na Soria
Ọ bụrụ n’ịche ihe ị ga-eme na Soria, anyị ga-agwa gị na o nwere ọmarịcha ihe nketa na nka na nri dị ụtọ.
Ihe ị ga-ahụ na Huesca
Dị ka ọ dị na Teruel, ógbè Aragonese nke Huesca bụ otu n'ime nnukwu ebe a na-amaghị na Spain. Ama m…
Ebe a ga-eri nri na Teruel
Ga njem bụ ahụmịhe maka ikike nghọta, dịkwa ụtọ. Ọ pụtara ịnweta ihe kachasị mma nke ...
Ihe ị ga-ahụ na Vitoria Gasteiz
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ihe ị ga-ahụ na Vitoria Gasteiz, anyị ga-agwa gị na obodo Basque nwere ọtụtụ ihe ncheta sitere n’ọgbọ niile na ọtụtụ ebe ndụ akwụkwọ ndụ.
Ebe iri nri na Huesca
Ebe kachasị mma iri nri na Huesca bụ agbata obi San Lorenzo na Coso Alto, nke mejupụtara El Tubo.
Ebe ịga leta na Spain
Spain bụ mba nke atọ n'ụwa na akụrụngwa akpọrọ World Heritage site na Unesco nke mere na site na ...
Àkwà mmiri Triana
Àkwà mmiri Triana bụ otu n'ime ihe ncheta ihe atụ nke Seville. N'ime ihe karịrị otu narị afọ nke akụkọ ntolite, ọ na-ejikọ obodo ahụ na agbata obi nke otu aha ahụ.
Gburugburu ihe okike gbara gburugburu gburugburu obodo na-adịghị ahụkebe, Cala Salada dị, otu n'ime ụlọ kacha mma na nke kachasị eleta ...
Ihe ị ga-ahụ na Jaca
Ọ bụrụ n’ịjula anya ịhụ ihe ị ga-ahụ na Jaca, anyị ga-agwa gị na obodo Aragon ahụ jupụtara na nnukwu ihe nketa ma nwee amaala Pyrenean mara mma.
Ihe ị ga-ahụ na Teruel
N'ime ógbè atọ ndị mejupụtara Aragon, enwere ike ịbụ Teruel onye amachaghị. N'agbanyeghị ịbụ otu n'ime ...
Dabere na ụkwụ Sierras de Tejeda, Almijara na Alhama Natural Park, obodo nke Alhama de ...
Baths nke Arab nke Granada
Inweta ezigbo bat bụ izu ike, maka ahụ na maka mkpụrụ obi. Ọtụtụ omenala na-aghọta ya n'ụzọ ahụ, ọ bụ ezie na e nwere ...
La Concha osimiri
Emblem nke San Sebastián na mpako nke ndị agbata obi ya, La Concha beach dị na n'ọnụ mmiri nke otu aha ahụ ...
Anyị na-agwa gị ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ileta Katidral nke Murcia, ụlọ okpukpe ya kachasị mkpa.
Toledo (Castilla-La Mancha, Spain) mara maka ọmarịcha ihe nketa akụkọ ihe mere eme, maka okporo ụzọ ya ochie na maka ...
Menorca na ụmụaka
Menorca bụ paradaịs maka ọtụtụ ebumnuche: oke ala ya na ụsọ mmiri ya, obodo ya mara mma, anwụ na-acha na nrọ, ya ...
Ihe ị ga-ahụ na Masca, Tenerife
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na obere obodo Masca dị na Tenerife, ebe nwere ọmarịcha njem ụkwụ.
Ihe ị ga-ahụ na Puerto de la Cruz, Tenerife
Anyị na-egosi gị ihe niile a pụrụ ịhụ n’obodo Puerto de la Cruz n’agwaetiti Tenerife.
Gaa Leta Alhambra na Granada
Anyị na-enye gị ụfọdụ ndụmọdụ dị mfe iji gaa Alhambra n'obodo Granada, ya na nnukwu ihe owuwu ya.
Ciudad Rodrigo nwere ihe niile iji mee ka ị daa n'ịhụnanya: nnukwu ihe owuwu dị egwu, ọdịdị ala okike magburu onwe ya na gastronomy dị ike.
Obodo nke Maderuelo bụ ihe owuwu ihe mere eme nke akụkọ ihe mere eme maka ọdịnala ochie ya. Mana, ọ bụrụ na nke a bara uru ịhụ, ọbụnadị karịa gburugburu ya.
Ihe 12 ime na Palencia
You na-aga ileta Palencia? Chọpụta atụmatụ iri abụọ iji mee ebe ndị kachasịkarị n'obodo Palencia nke ị na-agaghị echefu. You maara ha niile?
Ihe ị ga-ahụ na Calpe, Alicante
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ n’obodo Calpe, na Alicante, bụ́ ebe ndị njem nleta nwere ebe ndị mgbe ochie.
Kedu ihe ị ga-ahụ na Palencia?
Anyị na-abanye na Palencia, n'obodo a dị jụụ, n'ihi ya ị nwere ike ile anya atụmatụ kacha mma na ebe ị ga-eleta.
Cala Xarraca, ebe mara mma na Ibiza
Ibiza bụ otu n'ime Balearic Islands mara maka ịbụ otu n'ime nnukwu njem nleta na Europe ...
Dị nso na Barcelona, ​​obodo Caldes de Montbui mara maka mmiri mmiri ya. Ma ọ na-enye gị ihe ncheta na gastronomy bara ụba.
Anyị na-agwa gị ihe a pụrụ ịhụ na obodo Playa Blanca na Lanzarote, ebe ndị njem nleta n'ezie dị nso na ebe mmasị.
Gaa na San Pedro Alcántara
Spain nwere ọtụtụ ebe ndị njem nlegharị anya nke nwere ike ọ gaghị ewu ewu na ndị ọbịa si mba ọzọ. Ọfọn, ọ bụ oge ...
Otu n'ime ógbè Spanish ndị a na-amaghị ama maka ndị njem nwere ike ịbụ Teruel. Emi odude ke edem usiahautịn nke a ...
Obodo nke Granada, n’etiti oke osimiri na ugwu
Obodo ndị Granada amachaghị nke ọma dịka isi obodo mpaghara ahụ. Ma, ọ bụrụ na ị gaa na ha, ị ga-ama ebe ndị mara mma.
Brihuega Lavender Ubi
Ogologo oge, mpaghara lavender nke Provence abụrụla ebe dị mkpa maka njem nleta maka ndị hụrụ ha n'anya ...
Parks mmiri nke Spain
Otu n'ime atụmatụ nke ụmụaka na ndị okenye na-atọkarị ụtọ mgbe ụbọchị anwụ mbụ nke oge okpomọkụ rutere ...
Isi obodo Spain nwere ọtụtụ akụkụ dịka enwere agbata obi. Onye ọ bụla n'ime ha na-egosi ihu dị iche nke Madrid tupu ...
Chọpụta ihe enwere ike ịhụ na Santa María del Naranco, ọrụ nke kachasị mkpa na nka Asturian tupu Romanesque.
Las Médulas, Ihe Nketa Worldwa
Spain nwere ọtụtụ ala mara mma ma ụfọdụ abụghị ọrụ nke okike kama nke mmadụ na ọrụ ya mgbe niile ...
Ihe ị ga-ahụ na Oviedo
Anyị na-egosi gị ebe mmasị niile a pụrụ ịhụ na obodo Oviedo, ya na ebe akụkọ ihe mere eme dị mkpa na ụka ndị pre-Romanesque.
Ihe ị ga-eme na Tenerife
Kedụ maka ịmara Tenerife taa? Anyị na-amalite izu na nke kasị ukwuu nke asaa Canary Islands, a great ...
Ihe ị ga-ahụ na Soria
N'ịbụ nke dị na Castilla y León, anyị nwere ike ịkọwa Soria dị ka obere isi obodo nke na-ejigide amara ya ...
Ihe ị ga-ahụ na Gijón
Anyị na-egosi gị ihe niile a pụrụ ịhụ na obodo Gijón nke dị na mgbago ugwu Spain, obodo nwere osimiri, ọdụ ụgbọ mmiri na ọtụtụ ihe nketa.
Ogige Warner na Madrid
Emebere na June 2002, Parque Warner Madrid bụ otu n’ime ogige ntụrụndụ kachasị mkpa na Spain yana ...
Ihe ị ga-ahụ na Valencia na ụmụaka
Valencia bụ otu n'ime ndị isi na-eme njem nleta na Spain ka ọ na-achịkọta ihe niile ndị njem nleta ọ bụla nwere ike ịtụ anya na ...
Madrid na Barcelona bụ ndị isi obodo na Spain na ndị kasị ibu ma ọ bụghị naanị ha. Uto…
Dabere na onye nkwusa a ma ama nke ndị nduzi njem nleta, Lonely Planet, a ghọtara Seville dịka obodo kachasị mma n'ụwa ...
Ihe ị ga-ahụ na Segovia n'otu ụbọchị
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ n’obodo Segovia naanị otu ụbọchị, nwere nnukwu ihe ncheta na ọwa mmiri a ma ama.
Ogige Citadel nke Barcelona
Na Parque de la Ciudadela de Barcelona, ​​ruo ọtụtụ afọ, bụ naanị ogige ọha na eze n'obodo ahụ. Wuru ...
Isla Cristina bụ otu n'ime ebe njem nleta kachasị ewu ewu na ụsọ mmiri Huelva, nke dị kilomita ole na ole ...
Calahorra, isi obodo nke Rioja Baja, bu nnukwu uzo gastronomic na monumental ebe. Ọ bụ otu n'ime ...
Zọ ndị njem nlegharị anya na Madrid
Na mgbakwunye na ịbụ isi obodo Spain, Madrid bụ obodo mepere emepe, nke jupụtara na mbara igwe ma nwee ndụ nke nwere ọtụtụ mmadụ ...
Ihe ị ga-ahụ na San Antonio, Ibiza
Anyị na-agwa gị ihe niile a pụrụ ịhụ na obodo San Antonio na Ibiza, ebe ndị njem na-eme n'akụkụ osimiri na obodo ndị mara mma.
Alcazar nke San Juan
Alcázar de San Juan bụ obere obodo mara mma nke dị na Ciudad Real. Ọ nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme na iche iche ...
Ogige Ntụrụndụ El Teide
Ogige Ntụrụndụ Teide bụ nke kasị ukwuu nke Canary Islands. Ogige ahụ dum bụ akụ na-enweghị atụ banyere ala, ...
Cablegbọ ala eriri Madrid
Ọ bụrụ na ị na-aga ije ije na isi obodo Spain ma chọọ inweta ezigbo ije na elu na nke ọma ...
Ihe 10 kacha elu ị ga-eme na Madrid
Madrid bụ obodo jupụtara na ohere, na-enye ọtụtụ ọdịbendị na oge ezumike. Ezigbo maka…
Ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị oge gboo ngosi ihe mgbe ochie ma kama obere, mbụ, peculiar omume, mgbe ahụ na gị ọzọ njem Madrid adịghị ...
Alonega njem naanị na Spain
Mgbe ị na-eche njem njem naanị, ngwakọta akwara na mmetụta nwere ike ibilite na ihu nke amaghị, ...
Osimiri nke Spain
Spain nwere ihe karịrị kilomita 7.900 nke ụsọ oké osimiri. Ezigbo ihu igwe nke mba na uzo di iche iche di iche-iche ...
Ihe ị ga-ahụ na Seville na ụbọchị abụọ
Seville, lee obodo! Ọ bụ otu n'ime obodo ndị mara mma ma na-eleta na Spain, nke nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu ma ...
Molina de Aragón bụ otu n'ime obodo mara mma nke oge ochie na Guadalajara (Spain). Emi odude ke edere edere edere, ...
Ọwara mmiri nke Segovia
Onye oke ihe omuma María Zambrano na-ekwu na “na Segovia ọkụ anaghị ada site na mbara igwe, kama ...
Obi ụtọ na Jameos del Agua
Agwaetiti Lanzarote, otu n’ime ndi bi na Canary Islands, bu Biosphere Reserve ka odidi ya bu ...
Nleta Cabo de Palos
Oke akwa bu uzo ala nke n’eme ka oke osimiri rute na nke na emetuta ebili mmiri na ...
Ihe ị ga-ahụ na Valencia
Valencia bụ obodo nke atọ kachasị ukwuu na Spain na otu n'ime ebe ndị njem nleta na mba ahụ, ọ bụghị naanị ...
Garachico, ọdachi na njem nleta
Tenerife bụ otu n’ime agwaetiti ndị Canary, nke kachasị ukwuu na ọtụtụ mmadụ bi na ha. Ebe a, banyere ...
Obodo Las Rozas, ụlọ ahịa okomoko dị nso na Madrid
Today'swa nke ugbu a metụtara oriri, ihe efu, enweghị njedebe, nke sitere n'ike mmụọ nsọ ọtụtụ ugboro n'afọ na ...
Ihe ị ga-ahụ na Cantabria
Cantabria bụ otu n'ime ebe pụrụ iche na Spain n'ihi na ọ na-ejikọta ugwu, oké osimiri, gastronomy na ọdịbendị. Ọ bụ ebe…
Jerez de los Caballeros bụ otu n'ime obodo ndị Spen ikpeazụ na mpaghara Badajoz tupu ọ gafee ...
Cercedilla, ebe njedebe Madrid
Obodo Madrid dị nso na Cercedilla, ebe ghọrọ ewu ewu n'ihi njem nleta ...
Ihe ị ga-ahụ na Barcelona n'ime ụbọchị atọ
Barcelona bụ otu n'ime obodo ndị ahụ ị na-agaghị echefu ma ọ ga-aga njem na Mediterenian, na njem ...
Theaterlọ ihe nkiri Rome nke Mérida
N'ebe ọdịda anyanwụ Spain bụ Mérida, isi obodo Extremadura, nke ndị Rom hiwere na ...
Ebe ihe ochie nke Madrid
Ọ dị na Salamanca district nke Madrid, ọ bụ otu n'ime ụlọ ngosi ihe mgbe ochie kachasị mkpa na Spain na-esote Museum ...
Otu n'ime ebe kachasị mma maka ọdịdị ala Catalan bụ Delta del Ebro Natural Park dị na ...
Ihe ịhụ n’obodo Llívia na Gerona
Anyị na-agwa gị ihe niile nwere ike ịhụ ma mee n'obodo Llívia dị na Gerona, nke mpaghara French gbara ya gburugburu.
Osimiri na-enye nkịta ohere na Asturias
Nkịta hụrụ n'anya ima elu na ebili mmiri nke oké osimiri ma na-asọpụta na mmiri dị ka ụmụ mmadụ….
Odi n'elu ugwu nke obodo mbu nke Gasteiz biri na ...
Isla Mágica, ogige ntụrụndụ na Seville
Choputa ihe nlere di nma nke Seville Isla Mágica park park, ebe juputara na obi uto na ihe omume.
Kedu mgbe ọ ka mma ileta Barcelona
Barcelona bụ otu n'ime obodo ndị kacha eleta na Europe, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ndị njem itoolu kwa afọ, ekele maka amara ya ...
Anyị na-eru nso n'oge okpomọkụ ma ọtụtụ n'ime anyị na-ahazi ezumike. Anyị nwere ike ịga mba ọzọ ma ọ bụ afọ a kwesịrị ...
Ebe obibi ndị mọnk Yuste
N'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke mpaghara Cáceres, na nso Cuacos de Yuste, bụ ebe obibi ndị mọnk Yuste, ebe ...
Ọnụ Alzọ Almá Alcala
Otu n'ime ihe ncheta kachasị mma nke isi obodo Spain bụ Puerta de Alcalá. Aha ya abughi ...
Katidral nke Barcelona
Sagrada Familia dị na Barcelona bụ ụlọ nsọ Katọlik kachasị ewu ewu n'etiti ndị njem nleta na-ada na Barcelona ...
Anyị na-agwa gị nkọwa niile ịchọrọ ịma banyere Katidral nke León na ngosipụta nke ụdị Gothic na facade ya.
Peratallada, ihe ị ga-ahụ
Chọpụta ihe anyị nwere ike ịhụ na Peratallada, obere obodo ochie nwere ọmarịcha mma dị na mpaghara Bajo Ampurdán.
Chueca bụ otu n'ime ógbè ndị ama ama na Madrid. Site na nkpuru obi mmadu nile, o sitere na ya ...
Kedu mgbe ọ ka mma ịga Mallorca?
Kedu mgbe ọ ka mma ịga Mallorca? Ọ bụrụ n’inweghi n’aka oge kachasị atụ aro, bata ma rịba ama ndụmọdụ anyị iji nwee njem a na-agaghị echefu echefu.
Ahịa San Miguel na Madrid
Anyị na-egosi gị ihe niile Mercado de San Miguel nwere ike ịnye gị n'ime obi Madrid, ohere dị mma nke gastronomic.
Nleta nke Royal Palace nke Madrid
Obodo dị ka Madrid nwere ọtụtụ ebe ị ga-eleta ma ọ bụrụ na ị bụ onye njem. Lọ ahịa, ogige ntụrụndụ, agbata, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na N'ezie, obí eze….
Katidral nke Sevilla
E kwupụtara Ebe Ihe Nketa Worldwa, ya na Real Alcázar na Archivo de Indias, Katidral nke Seville bụ ...
Lọ Elu nke Hercules
Anyị na-agwa gị nkọwa niile nke Towerlọ Elu Hercules a ma ama, ụlọ ọkụ ihe atụ nke obodo A Coruña n'ụsọ mmiri nke Galicia.
Naanị kilomita 50 site na Madrid, nke dị n'etiti ọmarịcha Sierra de Guadarrama na ugwu ...
Ihe ị ga-ahụ na Segovia
Anyị na-agwa gị ebe mmasị ị ga-ahụ na obodo Segovia, site na ọwa mmiri ya ruo Alcázar mara mma ma ọ bụ n'ámá nke obodo ochie.
Ihe ị ga-ahụ na Madrid
Madrid bụ isi obodo nke Spain, kasị ibu obodo na mba na nke abụọ na European Union na a ...
Ihe ị ga-ahụ na El Retiro Park
Anyị na-egosi gị ebe ndị nwere mmasị a pụrụ ịhụ na El Retiro Park a ma ama na etiti Madrid.
Oceanographic nke Valencia
N'afọ gara aga Oceanogràfic nke Obodo Arts na Sayensị nke Valencia mere emume afọ iri na ise kemgbe ...
The Altamira Caves, Sistine uka nke prehistoric art
Nchọpụta nke oghere Altamira na njedebe nke narị afọ nke XNUMX pụtara mgbanwe na ihe ọmụma nwere ...
Otu n'ime ogige ntụrụndụ ndị mara mma na Madrid na ndị kacha mara amara bụ El Capricho Park. Ọ bụ ihe dị…
Alcazar nke Segovia
N'etiti Clamores na Eresma, Alcázar de Segovia na-arịgo n'elu nkume, ụlọ ochie nke nwere mmalite ...
Ogige Ntụrụndụ Timanfaya
Anyị na-egosi gị ihe Timanfaya National Park dị na Lanzarote dị, ogige nke mgbawa ugwu sitere na nnukwu njem nleta na mmasị ala.
Katidral Burgos, nke mara mma
Enwere m mmasị na chọọchị Gothic karịa ụdị ụlọ ndị ọzọ, ọ bụrụ na ọ mere gị ...
Otu esi aga Parc Güell
Ihe nketa nke oge a nke Antonio Gaudí na Barcelona bụ ihe na-atọ ụtọ: Casa Batlló, Sagrada Familia, Casa Milà… Na-enweghị…
Lọ nsọ nke Debod na Madrid
Otu n'ime nnukwu akụ dị na isi obodo ahụ dị na Parque de la Montaña de Madrid ...
Nleta nke Castillo de San Marcos
Spain jupụtara na nnukwu ụlọ ma taa anyị ga-elekwasị anya na nke mara mma nke dị na Cádiz, na ...
Mpaghara metro Madrid
Kwa ụbọchị, ọtụtụ puku mmadụ na-aga metro Madrid iji gbaa isi obodo Spain. Ya banyere…
Towerlọ Elu nke Collserola
E nwere ọtụtụ ụlọ elu na ụwa na-ihu ọma mezuo ọrụ nkwukọrịta. Ga-ejikọta ụwa mgbe ...
Anyị na-agwa gị nkọwa ịchọrọ ịma banyere Patio de los Leones dị egwu nke dị na Alhambra na Granada.
Ihe ncheta Madrid
Anyị na-ekwu maka isi ihe ncheta ndị ị na-ekwesịghị ịhapụ na ịga na Madrid, yana ebe ndị njem nleta na-adọrọ mmasị.
Castlọ nke Monjuïc dị na Montjuïc ugwu na Barcelona na ọ bụ otu n'ime nleta dị mkpa n'obodo ahụ.
Ski Fans n'ezie tinyego ụkwụ na La Molina, ebe egwuregwu egwuregwu dị na Cerdanya, mpaghara ...
Castillo de Colomares, nnukwu ụlọ nke oge a
Europe jupụtara na castles niile ụdị na afọ, na Spain e nwere n'ezie bụ ọtụtụ ihe ịhọrọ site na. Ma taa, anyị enweghị ụlọ ochie ma ọ bụ na Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihe ndị dị ịtụnanya ma ọ bụ na-amasị gị kitsch, wee gagharịa na Malaga wee mata Castillo de Colomares, ebe nzuzu
Ibiza na umuaka
Mgbe anyị na-eche banyere Ibiza, ihe mbụ na-abata n'uche bụ agwaetiti jupụtara na discos, pubs na coves ...
Na Barcelona anyị na-ahụ akụkụ dị mma nke ihe nketa nke Antonio Gaudí, otu n'ime ihe ndị dị mkpa n'oge a na Spain. Anyị maara ...
Gaa na Ibiza maka naanị 8 euro
Ọ bụ onyinye na-efe efe, ọ dịghị mgbe ọ bụla ka mma. N'ihi na njem na Ibiza maka euro 8, njem gburugburu, ọ bụghị mgbe niile ka a na-ahụ ya. Na-emeso onwe gị!
Ihe ị ga-ahụ na Santiago de Compostela
Santiago de Compostela bu Rome ye Jerusalem, kiet ke otu edisana obio Ido Ukpono Christ. Mgbe na narị afọ ...
Agwaetiti Tenerife bụ ebe ndị njem nleta na-enye ihe niile site n'ụsọ osimiri na ebe a ma ama mara mma, ọnụ ugwu ma ọ bụ ọgba oge ochie.
Cala Mitjana, ebe ezumike
Menorca ọzọ, ọzọ a mara mma agwaetiti ya mara mma osimiri ka a dị ka a super ewu ewu na-atụ aro n'oge okpomọkụ ebe. Banyeghi ezumike ugbua n'oge okpomọkụ a? Mgbe ahụ gawa Menorca ma ebe a akwụsịla sunbathing na Cala Mijtana.
Cala Turqueta, akụkụ mara mma na Menorca
Ebe ezumike dị mma bụ Balearic Islands, obodo agwaetiti kwụ ọtọ nke Spain nke dị na Oké Osimiri Mediterenian na onye isi obodo ya bụ Palma. N'ime Do chọrọ ịnweta osimiri n'oge okpomọkụ a? Isi na Menorca ma nọrọ ụbọchị ahụ na Cala Turqueta: ájá ọcha, mmiri na-acha anụnụ anụnụ, osisi pine, anyanwụ ...
Obodo ndị kachasị mma na Sierra de Huelva
Na Sierra de Huelva enwere obodo nta mara mma mara mma, nke nwekwara ọtụtụ ebe akụkọ ihe mere eme.
Ogige Santa Cruz, na Seville
Kedu maka ije ije na Santa Cruz agbata obi, n'etiti Seville? Oldlọ ochie, katidral, ogige, ogige na ọtụtụ ebe maka tapas.
Ihe ị ga-ahụ na Astorga, mpaghara nke León
Obodo Astorga nke Leonese bụ ebe agafe Camino de Santiago mana ọ bụkwa ebe akụkọ ihe mere eme iji chọpụta.
Ihe ị ga-ahụ na Jerez de la Frontera, Andalusia
Obodo Jerez de la Frontera nwere ebe mara mma mara mma na ọtụtụ ihe ncheta iji hụ mgbe ị na-eleta ebe mmasị ya.
Hoces del Río Duraton ogige ntụrụndụ dị na Segovia
Las Hoces del Río Duratón mejuputara ala mara mma nke di n’ime ogige ihe okike nke di na mpaghara Segovia, nke oma maka ime njem.
Chọpụta obodo kachasị mma na Spain
Chọpụta ụfọdụ n'ime obodo ndị kachasị mma na Spain. Obodo a ga-eleta ma ọ dịkarịa ala otu oge na nke ahụ na-enye ọtụtụ akụkọ ntolite na ntụrụndụ.
Mara obodo ndị mara mma na Alicante
Chọpụta nke bụ obodo kachasị mma na Alicante, obodo mara mma nke na-enye ụlọ akụkọ ihe mere eme na ebe mmasị.
5 Nzuzo Madrid nke ị kwesịrị ịma
Dị ka isi obodo Spain, Madrid bụ obodo nke jupụtara na ncheta, ụlọ nri, ụlọ ahịa, ogige ntụrụndụ, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, wdg. na-enye ọtụtụ ...
Patios de Córdoba, Ihe Nketa A Na-apụghị anghụ Anya nke itymụ mmadụ
Patios nke Córdoba abụrụlarị saịtị ọdịnala ụwa ma enwere ike ịga leta ya n'oge Fiesta de los Patios n'obodo ahụ, nke a na-eji okooko osisi chọọ ha mma.
Ndị Castañar del Tiemblo na Castilla y León
Anyị nọ n'etiti oge opupu ihe ubi ma onye ọ bụla na-achọ ebe ịga ije, ebe okike nke ...
Kasị ọnụ ọnụ ugwu na Spain
Osimiri Spain nwere ụsọ mmiri nke ezigbo aja na mmiri dị jụụ, mana ọ nwekwara ugwu ugwu ...
Los Gigantes ọnụ ọnụ ugwu na Tenerife
Ugwu Los Gigantes dị na Tenerife abụrụla otu n'ime ebe ndị njem nlegharị anya, ebe ha na-enye ahụmịhe zuru oke ma na-atọ ụtọ.
10 nke osimiri kacha mma na Tenerife
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime osimiri iri kacha mma na Tenerife, oke ájá dị omimi nke na-egosi ịma mma nke agwaetiti ahụ.
Ihe ị ga-ahụ na Nerja, obodo ndị njem nleta na ndịda
Chọpụta ihe niile ị nwere ike ịhụ na obodo Malaga mara mma nke Nerja, nke a maara maka Balcón de Europa na ọgba ochie ya.
Utezọ gafere na mpaghara Gothic nke Barcelona
Wuru na foduru nke Barcino, ndị Roman ụzọ nke Barcelona, ​​n'oge Middle Ages Gothic obí eze wuru na…
Osimiri kacha mma na Valencia
Osimiri Valencia bụ otu n'ime ebe ndị kachasị aga na Spen maka ndị hụrụ ịgha ụgha na anyanwụ na ...
Osimiri kacha mma na Mallorca
Chọpụta osimiri kachasị mma na Mallorca, site na obere obere ma dị jụụ na osimiri ndị ọzọ dị na ebe ndị njem nleta.
Castle Almodóvar, Egwuregwu nke ocheeze na Spain
Egwuregwu nke n'ocheeze na-amasị gị? Ọfọn, na Spain ị nwere ike ịga na Castle nke Almodóvar, na usoro Highgarden, ụlọ nke Tyrells. Otu n'ime ndị kacha mma na Spain.
Ihe ị ga-ahụ na Almería
Chọpụta ihe niile ị nwere ike ịhụ na Almería, site na ebe ndị njem nleta nke obodo ahụ ruo n'okwu ndị dị na mpaghara ahụ, dịka ọzara Tabernas a ma ama.
Ihe ị ga-ahụ na Seville
Chọpụta ihe niile ị nwere ike ịhụ n’obodo Seville, site na Giralda a ma ama na katidral ya ma ọ bụ Museum na-atọ ụtọ nke Flamenco Dance.
Ọzụzụ Zorrilla, ụzọ dị iche iche iji chọpụta Valladolid
N'etiti Febụwarị 3 na Nọvemba 24, 2018, Satọde ọ bụla ọ ga - agbasa n'etiti Madrid na Valladolid ...
Sephardic Museum nke Toledo, a njem n'ime Spanish Juu omenala
N'ime obodo ochie nke ndị Juu nke Toledo ma were ya dịka ụlọ nzukọ nke ochie echekwara nke ọma n'ụwa, anyị na-ahụ ụlọ nzukọ nke ...
Ọ bụrụ na anyị ahapụ ụlọ ime ime obodo?
Gịnị ma ọ bụrụ na izu ụka a ma ọ bụ akwa ezumike ọzọ ga-aga n’ụlọ ime ime obodo? Ọ bụrụ n ’ịmabeghị obodo ndị a dị n’ime ime, ị na-ewerela oge!
Alhambra meghere ọha na eze na Jenụwarị ụlọ nke Carlos V
Na njedebe nke 2016, a họọrọ Granada dịka obodo kachasị mma na Spain na asọmpi a haziri na netwọkụ ...
A ije site na Sorolla House-Museum na Madrid
Gburugburu ubi mara mma gbara ya gburugburu nke dịkwa na nnukwu ụlọ obibi na n'okporo ámá General Martínez Campos na Madrid, ọ bụ ...
Ebe mara mma na ndịda Spain: Andalusia
N'isiokwu anyị taa, anyị kwadoro ụfọdụ ebe mara mma na ndịda Spain: Andalusia. Enwere saịtị 10 akwadoro n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Littlelọ ihe ngosi nka 5 a ma ama n'efu ileta na Madrid
Madrid nwere netwọkụ nke ihe ngosi nka nke obodo nwere ebe ị nwere ike ịmụ banyere akụkọ ihe mere eme nke ...
Ọnụ ụzọ nke ala asaa nke Alhambra ga-emeghe ọha na eze na November
N'ime ọnwa nke ọnwa Nọvemba ma wezuga, Alhambra na Granada ga-emeghe Puerta de los ...
Ihe ị ga-eme na Mallorca n'oge oyi
Mallorca bụ agwaetiti nke oge okpomọkụ, mana n'oge oge dị ala ọ nwekwara ike ịbụ ebe dị mma iji chọpụta isi ihe ncheta ya.
Mars n'uwa: Riotinto Mining Park
N'isiokwu anyị taa, anyị gara Mars na ụwa: Río Tinto Mining Park. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata osimiri dị iche a, gaa Huelva.
León, Spanish Isi Obodo nke Gastronomy 2018
León, Spanish Capital nke Gastronomy 2018, onye nọchiri onye nke afọ gara aga: Huelva. Kedu ngwaahịa ndị e ji amata na León?
Ememme ndị a ma ama na Spain
Site na edemede anyị taa, ịchọrọ ịgafe obodo anyị. Anyị na-ewetara gị ụfọdụ ememme ndị ama ama na Spen n'ọnwa Ọktọba.
Na-agagharị na Juan Carlos I Park, akpa ume nke Madrid oge a
Ikpeazụ nke May, Juan Carlos I Park mere ememme ncheta 25th nke afọ dị ka nnukwu nku ume nke Madrid ugbu a….
Alhambra dị na Granada ga-emepe Torre de la Pólvora n'ihu ọha na Septemba
Dị ka ọ na-eme kemgbe oge opupu ihe ubi gara aga, Board nke Alhambra na Generalife nke Granada meghere ọha na eze nke ...
Ebe nkiri kachasị mma na Spain dị ka TripAdvisor si kwuo
Chọta ebe nlegharị anya iri kachasị mma na Spain dị ka ọnụ ụzọ TripAdvisor. Ebe anyị ga-ede maka ezumike ọzọ.
5 na-ezube ịnụ ụtọ oge ọkọchị na Madrid
Ọgọstụ abịarute na ndị Madrid kwụ ọtọ na ngwa ngwa ịhapụ nnukwu obodo ahụ. Enweghị osimiri ma ogologo oge gara aga ...
Ndụmọdụ iji kwadebe ime Camino de Santiago
Anyị na-enye gị ndụmọdụ ole na ole bara uru iji kwadebe ime Camino de Santiago na ụfọdụ nnukwu ọkwa ya.
Car mgbazinye na Barcelona
Na-achọ mgbazinye ụgbọ ala na Barcelona? Chọpụta nke a na nhọrọ ụgbọ njem ndị ọzọ na Barcelona ka ị nwee ike iru ebe niile.
Oke osimiri 5 kacha ọcha na Spain maka ịsa ahụ
Ndị a bụ ụsọ osimiri 5 kachasị ọcha na Spain maka ịsa ahụ. Ha nọ na Alicante na Andalusia. You banyela nke ọ bụla n'ime ha?
Ndị kasị mma mara mma ọdọ mmiri na mba anyị
N'isiokwu a anyị na-anakọta ụfọdụ ọdọ mmiri mara mma kachasị mma na mba anyị. Ọ bụrụ n ’ị bụ nke mmiri a na-egwupụta karịa osimiri, nọrọ ma gụọ.
Ihe 11 dị mkpa iji nwee obi ụtọ Granada
Choputa ihe 11 dị mkpa iji nwee obi ụtọ Granada, echiche maka ihe niile masịrị n’obodo Granada na gburugburu ya.
Oge ọkọchị na Almería? N'ezie! Ọ bụrụ na ị nwere ụfọdụ osimiri kacha mma na Spen! Enwere coves, ogologo osimiri, ọnụ ọnụ ugwu, obodo na obodo.
Ihe ị ga-ahụ ma mee na obodo Malaga
Obodo nke Malaga bụ njikọ zuru oke nke ihe ncheta, ebe ngosi ihe mgbe ochie na oge ezumike na osimiri na n'okporo ámá ịzụ ahịa ebe ị nwere ike ịnọ ụbọchị.
Torre de los Picos de la Alhambra ga-emeghe n'ihu ọha naanị na July
N'oge na-adịbeghị anya, ndị Nlekọta Nlekọta nke Alhambra na Generalife nke Granada na-enye ndị hụrụ ihe a n'anya ...
Sigüenza meriri aha Isi obodo nke njem ime obodo na 2017
N'oge na-adịbeghị anya Sigüenza meriri aha ihe atụ nke Capital of Rural Tourism na 2017 nke ọnụ ụzọ ...
5 ọdọ mmiri ndị dị na Spain zuru oke iji jụọ oyi n'oge ọkọchị
N'oge okpomọkụ amalitebeghị n'oge ọchịchị, mana okpomọkụ na mpaghara ụfọdụ nke Spain na-amalite ịbụ ...
Ihe ngosi akwukwo nke Madrid 2017 emeghewo
Otu afọ ọzọ Madrid Book Fair meghere ọnụ ụzọ ya na Paseo de Cocheros del Parque del ...
Mmiri ọdọ mmiri dị nso na Madrid
Ndị a bụ ụfọdụ ọdọ mmiri ndị dị nso na Madrid ị nwere ike ịnụ ụtọ site n'oge ọkọchị gaa. Fọdụ bụ n'efu ma ndị ọzọ nwere ọnụ ahịa.
Site na onyinye a, tinye ụlọ oriri na nkwari akụ na Córdoba ma gaa na ngosi ya
Site na onyinye a, debe ụlọ oriri na nkwari akụ na Córdoba ma gaa na ngosi ya, n'etiti ọtụtụ ihe ịtụnanya ndị ọzọ obodo ahụ debere maka gị, dịka ụlọ alakụba ya.
Alhambra ga-emepe Torre de la Cautiva n’ihu ọha naanị n’ọnwa a
Nnukwu ụgbọ elu na Palma de Mallorca, gburugburu, yana eDreams
Nnukwu ụgbọ elu na Palma de Mallorca, roundtrip, with eDreams ... Mara Mallorca ma ọ bụrụ na ịmebeghị ya na onyinye a magburu onwe ya.
Njem kacha mma site na Seville
Ọ bụrụ n'ịga ije ije na Seville, echefula ịchọpụta gburugburu ya. E nwere ọtụtụ obodo ileta n'ime na-eje ije dị anya! Córdoba, Cadiz, Jerez de la Frontera ...
Kedu ihe anyị nwere ike ịhụ ma mee na Vigo?
N’isiokwu a, anyị ga-ewetara gị ụfọdụ ihe anyị nwere ike ịhụ ma mee na Vigo n’izu na ọnwa ndị na - abịanụ: egwu, ije, ihe omume, wdg.
Gaudí's Casa Vicens ga-emeghe ọha na eze na 2017 maka oge mbụ
Oge mgbụsị akwụkwọ ọzọ, Casa Vicens na Barcelona ga-emeghe ọnụ ụzọ ya n'ihu ọha na nke mbụ ya mgbe ha birichara ebe obibi ...
6 Ihe ị ga-eme ma hụ na Cádiz kpamkpam n'efu
Taa isiokwu anyị nwere ike ikwu 6 ihe ịhụ na-eme na Cádiz kpam kpam free. Gụọ akụkọ a ma chọpụta ihe esi ‘sie’ ya bụ ‘Caí’.
Ebumnuche iji gaa Andalusia ma nọrọ ndụ
N’otu n’ime isiokwu taa, anyị nyere gị ọtụtụ ihe kpatara ị ga-eji gaa Andalusia ma nọrọ ebe ahụ. Hà dị mkpa n'ezie?
Gaa Ibiza si Madrid maka ihe karịrị 4 euro
Anyị achọtala nnukwu ihe a: Gaa njem na Ibiza site na Madrid maka ihe karịrị 4 euro na eDreams. Jiri ohere a mee ihe!
Akụ nke Hispanic Society of America na Prado Museum
Enwere ụzọ abụọ iji mara Spain na ọdịnala Hispaniki. Nke mbụ bụ ịga mba ahụ, gaa na obodo ya na ...
Caravaca de la Cruz na-eme ncheta afọ nke jubilii ya na 2017
Caravaca de la Cruz bụ obodo Spanish dị na mgbago ugwu ọdịda anyanwụ nke mpaghara Murcia. Onu ogugu ndi ...
Mojácar, ebe mara mma na Almería
You na-ama na-eme atụmatụ n'oge okpomọkụ 2017? Soro anyanwụ wee banye Almería: ọmarịcha obodo Mojácar na oke osimiri ya mara mma na-echere gị ebe ahụ.
Gaudí Casa Botines ga-emeghe ọnụ ụzọ ya na Eprel maka oge mbụ
Ọrụ nke onye ọkaibe ọgbara ọhụụ bụ Antonio Gaudí nwere njikọ chiri anya na Barcelona. Yabụ mgbe ị na-ekwu maka nke a ...
Basilica nke Atocha na Pantheon nke ụmụ nwoke na-ese onyinyo nke Madrid
Na nso Plaza de Carlos V na Madrid, nke a maara dị ka Atocha, bụ Basilica nke Nwanyị Anyị ...
4 ememme ifuru mara mma na Spain nke ga-eju gị anya
Na mmiri na-abịa ụbọchị anwụ, anwụ na mgbawa nke ike na agba site na okooko osisi ...
Na-agagharị n'ọzara Tabernas ma ọ bụ Spanish Far West
Ọzara Tabernas dị na Almería bụ otu n'ime ụdị oke okike ndị na-eju onye njem na-eleta anya ...
Las Fallas bịarutere na Valencia, ị dịla njikere?
Site na Machị 15 ruo 19, Valencia ga-emikpu na Fallas, nnukwu oriri ya. Ihe ngosi ọkụ ...
Na-agagharị na Malasaña, agbata obi nke Madrid
Mgbanwe ọdịbendị na mmekọrịta ọha mmadụ nke Madrid nwetara n'oge 70s na 80s nke narị afọ nke XNUMX ...
Ihe ndị nwere ike iju gị anya ma ọ bụrụ na ị bụ onye mba ọzọ wee gaa Spen
N'isiokwu nke taa, anyị ga-agwa gị ntakịrị gbasara Spain na "adịghị njọ" nke nwere ike iju gị anya ma ọ bụrụ na ị bụ onye mbịarambịa ma gaa na anyị.
Onye isi obodo Plaza dị na Madrid kwadoro maka emume ncheta afọ 400 ya
N'oge emume ncheta nke narị afọ anọ nke Plaza Mayor na Madrid, kansụl obodo nke isi obodo kwadebere maka ...
Culturalzọ 3 na ọdịnala ọdịnala na Spain maka 2017
Oge ọ bụla n'afọ dị mma maka mgbapụ, yabụ ọ bụ ihe amamihe iji dozie ...
Nnukwu ụlọ na mpaghara Andalusia (II)
Edemede nke taa bu nke n’iru nke gara aga na ulo ndi obodo Andalusia. Oge a anyị ewetala gị anọ.
Otu nnukwu ụlọ na mpaghara Andalusia (I)
Isiokwu nke oge a dị mma maka ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme na ụwa nke nnukwu ụlọ n'anya: Andalusia na ụlọ ya, otu mpaghara.
Ọnọdụ 10 na Spain iji gbanahụ oge oyi
Chọpụta ebe 10 na Spain iji gbanahụ oge oyi, ụzọ mgbapụ iri iji gaa ebe dịtụ ọkụ na nso.
Uzo nleta ndi mmadu kachasi ele anya na Madrid na 5
Madrid bụ otu n'ime obodo ndị na-adọrọ mmasị na Spanish ị ga-eleta ebe ọ nwere ọtụtụ ebe ndị njem nleta sitere na isi ...
Ebe ncheta 5 gara na Spain na 2017 a
Naanị wepụtara 2017 a, oge eruola ịmalite iche echiche banyere ụzọ anyị ga-esi mee afọ a. Iri na otu hapụrụ ...
Ebee ka ndị Spain anyị kacha eme njem?
Ihe ndị a bụ ụfọdụ ọnụọgụ nke weebụsaịtị Kayak wepụtara, gbasara ọchụchọ ndị Spain na-eme n'oge. I tụrụ anya ya?
Ihe ị ga - ahụ na mpaghara Pontevedra (II)
Anyị na-aga n'ihu na-achọpụta akụkụ dị na mpaghara Pontevedra, site n'ụsọ oké osimiri nke Cabo Home ruo Castillo de Soutomaior ma ọ bụ mmiri mmiri Barosa.
Ihe ị ga - ahụ na mpaghara Pontevedra (I)
Chọpụta ihe niile ị nwere ike ịhụ na mpaghara Pontevedra, site na obere obodo ruo mkpọmkpọ ebe na ihe ncheta.
The 5 kasị gara European obodo
Anyị na-agwa gị nke bụ obodo 5 kachasị nleta na Europe na 2016. E nwere otu Spanish n'etiti ha, ị nwere ike ịkọ nke?
Gaa Tenerife, ihe ị ga-ahụ n'àgwàetiti ahụ
Tenerife bụ agwaetiti nke nwere ike ịnye ọtụtụ n'ihe gbasara njem, site na ụsọ mmiri gaa n'okirikiri njem na ebe na-atọ ụtọ nke ukwuu.
Ihe ị ga-eme ụbọchị Krismas ndị a na Barcelona
N’isiokwu a anyị na - agwa gị ụfọdụ ihe ị ga - eme n’ụbọchị ekeresimesi ndị a na Barcelona, ​​obodo Barcelona. Kporie n'okporo ámá ya ndị na-enye ìhè.
Routezọ a gafere usoro egwuregwu nke ocheeze na Spain
Usoro ihe onyonyo telivishọn, nke ejiji n'oge a, aghọwo mgbasa ozi kacha mma maka ndị njem ...
Ihe ị ga-eme na Santiago de Compostela
Enwere ọtụtụ ihe ị ga - eme na Santiago de Compostela, obodo jupụtara na nkuku mara mma na ọtụtụ akụkọ ntolite, site na Katidral ya ruo obodo ochie.
Ebe nleta World Heritage saịtị na Spain
Ga na saịtị ihe nketa ụwa na Spain: anyị biri na ndịda na Seville, Córdoba na Granada na etiti na Segovia na Salamanca.
A họọrọ obodo Granada dị ka onye kachasị mma na Spain
Ndị Spanish hụrụ Granada n'anya. Nke a bụ ihe enwere ike ịchọta site na nsonaazụ enwetara na ...
7 echiche iji nwee obi ụtọ na Christmas na Madrid na 2016
Ọ bụghị oyi na Madrid, ọ bụ Christmas. Nke a bụ otu okwu ndị isi obodo nke isi obodo ...
Obodo kachasị mma na Spain na obodo ochie
Anyị na-ekwu maka obodo kachasị mma na Spain na obodo ochie. Na mpaghara okwute na ihe ncheta puru iche ichota.
Ihe ị ga - eme na n'efu na Madrid
Chọpụta ọtụtụ ihe ị nwere ike ime n'efu na Madrid. Site na ileta ụlọ ihe mgbe ochie kachasị mkpa iji hụ Royal Obí ma ọ bụ n'ámá.
Fallas nke Valencia abụrụla ebe ihe nketa ụwa
Mgbe afọ abụọ nke nkwalite siri ike n'ịkwado ịzọ ọkwa nke Las Fallas ka ọ bụrụ Ihe Nketa Na-enweghị Nweta nke ...
Site na polvorón ruo polvorón site na ụfọdụ obodo Spanish
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enwe mmasị ịmecha nkọwa nke nri abalị Krismas gị, taa anyị na-eweta edemede 100% gastronomic.
10 obodo Spanish ị ga-eleta n'oge oyi (II)
Chọpụta obodo ise ndị ọzọ dị na Spanish nke anyị na-akwado ịga leta n'oge oyi a, n'ihi na ha niile nwere ihe na-atọ ụtọ.
10 obodo Spanish ị ga-eleta n'oge oyi (I)
Chọpụta ụfọdụ ebe oyi na obodo Spanish, ị gaghị aga ebe dị anya iji nwee ọmarịcha njem.
4 gourmet ahịa ị ga-achọ ịga na Spain
Ahịa nri ochie nke obodo aghọwo, oge na-aga, oghere gastronomic ebe ...
Getzọ mgbapụ na Albarracín na Teruel, ezigbo Aragonese dị mkpa
N'ime ógbè atọ ndị mejupụtara Aragon, ọ nwere ike ịbụ Teruel bụ onye a na-amaghị ama. Agbanyeghị, ọ nwere ụlọ nke ọtụtụ ...
Nleta na Castillo de los Guzmanes na Niebla, Huelva
Anyị na-eleta Castillo de los Guzmanes na Niebla, Huelva, nke dị naanị nkeji 20 site na obodo ahụ. Castlọ ukwu echekwara nke ọma na ị ga-ahụrịrị.
Etu esi eme ememme Herpanic Heritage na Madrid?
Panoramic nke Plaza Mayor na Madrid Na Ọktọba 12, Ememme National Spanish ga-eme ma ọ bụ, dị ka ...
Ọdịnihu nke ụlọ España na Plaza de España na Madrid
Na Plaza de España nke dị na Madrid bụ otu n'ime ụlọ kachasị mma nke isi obodo ahụ ...
5 Gourmet ahịa na Madrid maka nri
Ruo oge ụfọdụ, ahịa ndị na-eri nri amụbawo na nnukwu isi obodo ndị ghọrọ ...
Huelva, nzọụkwụ site nzọụkwụ (II)
Ọ bụrụ n ’elekere ole na ole gara aga, anyị tụrụ aro nnukwu akụkụ 5 nke Huelva, ebe a ka anyị wetara gị ise ọzọ Ọbịbịa ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iwu!
Huelva, nzọụkwụ nke nzọụkwụ (I)
N'isiokwu a, ị ga-ahụ akụkụ 5 dị elu nke akwadoro nke Huelva. Huelva abughi nani osimiri, obodo ya dikwa nma.
Ihe ị ga-ahụ ma mara na Barcelona, ​​obodo Barcelona
N'isiokwu a, anyị ga-akọwapụta ebe ise ị ga-agarịrị ma ọ bụrụ na ị na-aga Barcelona, ​​obodo Barcelona, ​​n'oge na-adịghị anya.
Ihe ị ga-ahụ na Córdoba na ụbọchị ole na ole
Chọpụta ihe ị ga-ahụ na Córdoba ma ọ bụrụ na ị ga-anọ ụbọchị ole na ole n'obodo a. Jiri oge ahụ ebe kachasị mma.
Gaa njem na Tabernas Desert na Almería ma ọ bụ Spanish Far West
Otu n’ime ebe kachasị mkpa agwaetiti Iberian Peninsula bụ Ọzara Tabernas, naanị otu ọzara na Europe. Ọ dị ...
Spain, ihe nkiri setịpụrụ
Usoro ihe onyonyo, nke ejiji na nso nso a, na sinima abụrụla mgbasa ozi kachasị mma ...
6 anwansi anwansi na Galicia
Chọpụta akụkụ anwansi ole na ole na Galicia, ebe na-aga n'ihu na-eto eto na njem nlegharị anya maka ihe niile ọ na-enye.